Honda CR-V 2012 (#607980) ကို Thingangkuun မြို့နယ်တွင်ရေ... | CarsDB
2018-05-16 12:15:07 +0630
HONDA CR-V 2012 (FOR SALE - 620 သိန်း)
Model Year- 2012
Chasis No. - RM1
- 2000CC, 2WD.
- Original TV + Back Camera (TV နှစ်​ထပ်​).
- Push Start, Fog Light.
- ရန်​ကုန်​လိုင်​စင်​, ပိုင်​ရှင်​အမည်​​ပေါက်​, ​နောက်​ဆုံးနံပါတ်​
ဈေးနှုန်း - 620 သိန်း ( ​နောက်​ဆုံးနံပါတ်​ / ရန်ကုန်​​လိုင်စင် )
ဆက်သွယ်ရန် - 09-5198552, 09-78 5198552, 09-254254161, 09-781211956
**လိပ်စာ - အမှတ်(၁၄/ဘီ)၊ မင်္ဂလာရိပ်သာလမ်း၊ ဇ၀နရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။**
Lot Number: #607980